ကျေးဇူးတော် အကြောင်း (၃) | Rev.U Min Lwin
ရှင်ယောဟန် ၈း၁၁ တွင်တွေ့ရသည့် "ငါလည်း သင်၏ အမှုကို မစီရင်"ဆိုသည့် အပိုင်းသည် ကျေးဇူးတော်၏ ပထမပိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုအပိုင်းသည် ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်သည့်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ ဒုတိယပိုင်းမှာ သွားလော့၊ နောက်တဖန် ဒုစရိုက်ကို မပြုနှင့် ဆိုသည့် အပိုင်း သည် ကျွန်တော်တို့ ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားပြီးနောက် ပြန်လည် တုန့်ပြန် ရမည့် အပိုင်း ဖြစ်သည်။
ပြန်လည် တုန့်ပြန်ရမည့်ကျေးဇူးတော် (တိတု ၂း၁၂-၁၃)
ပြစ်မှားသော မိန်းမကို ယေရှုခရစ်တော် ပြောသည့် စကားတွင် နောက်တဖန် ဒုစရိုက်မပြုနှင့် ဟု ပြောဆိုခဲ့ရာ မပြုနှင့်ဆိုသော အပိုင်းသည် ကျွန်တော်တို့ကို သွန်သင်နေခြင်း ဖြစ်ရာ ဘုရားတရားမဲ့ နေခြင်း၊ လောကီ တပ်မက်ခြင်း တို့ကို မပြုရန် သွန်သင် နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ တပ်မက်ခြင်း များကို ရည်ညွှန်း ပြောဆိုနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ယေရှုခရစ်တော် ဘုန်းတော်ထင် ရှားမည့် အချိန် ကာလ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများကို မျှော်လင့်နေချိန်တွင် မိမိကိုယ်ကို ချုပ်ထိန်းခြင်း၊ ဖြောင့်မက်စွာ အသက်ရှင်ခြင်း၊ ဘုရားဝတ်၌ အသက်ရှင်ခြင်း တို့ဖြင့် ဤဘ၀တွင် အသက်ရှင် ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် သင်နောက်တဖန် ဒုစရိုက် မပြုနှင့် ဆိုသည့် အပိုင်းဖြစ်သည်။ကျေးဇူးတော် ဆိုသည့် စကားလုံးသည် ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ရုံ မျှသာမကဘဲ ဘုရားမဲ့ တရားမဲ့ နေခြင်း၊ လောကီ အညစ် အကြေး တပ်မက်ခြင်း တို့ကို မပြုနှင့် ဟူ၍လည်း သင်ကြား ပေးနေပါသည်။ ထိုစကားလုံးပင် ရှင်ပေါလုက ရောမ ၁း၁၈ တွင် အသုံးပြု ထားသည်မှာ သမ္မာတရားကို အဓမ္မဖြင့် ဆီးတား နှိပ်စက်သော သူတို့ ပြုတတ်သော ဘုရားမဲ့နေခြင်း အမှု၊ တရားကို ကျူးလွန်ခြင်းအမှု၊ အမျိုးမျိုးတို့ တဘက်၌ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် ကောင်းကင်မှ ထင်ရှားလျှက် ရှိ၏။ ရှင်ပေါ်လုက ထပ်မံ၍ လောကီတပ်မက်ခြင်း ဆိုသော စကားလုံးကို ရှင်းလင်းရာ၌
ရောမ ၁း၂၁ အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို သိလျှက်ပင် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသင့်သည်အတိုင်း မချီးမွမ်း ကျေးဇူးတော်ကိုလည်း မသိမမှတ် အချည်းနှီး တွေးဆခြင်း၊ သတိမရှိသော စိတ်နှလုံး မိုက်မဲခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။
ရောမ ၁း၂၃ မဖောက်ပြန် မပျက်စီးနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ပယ်လျက်၊ ဖောက်ပြန် ပျက်တတ်သော လူ၏ ရုပ်တု၊ သားငှက်၊ အစရှိသော တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်၏ ရုပ်တုတို့ကို ဘုရားသခင် အရာ၌ ချီးမြှောက်ကြ၏။
ရောမ ၁း၂၆ မိန်းမတို့သည် ပကတိ ထုံးစံကို စွန့်၍၊ ပကတိနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ထုံးစံကို လိုက်ကြ၏။
ရောမ ၁း၂၁ ထို့အတူ ယောင်္ကျားတို့သည်လည်း မိန်းမနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ ပကတိ ထုံးစံကို စွန့်၍ အချင်းချင်း ကိလေသာ စိတ်ပူလောင် သဖြင့် ရှက်ကြောက်ဖွယ်သော အမှုကို ယောင်္ကျားချင်း ပြုလျက်၊ မိမိတို့ မှားယွင်းခြင်းနှင့် အလျောက် မိမိတို့ အပြစ်ဒါဏ်ကို ခံရကြ၏။
ဤမျှလောက် ဘုရားသခင် ရွံရှာ စက်ဆုတ်တော် မူသော အမှုအရာကြီးကို အချို့နိုင်ငံများက ဥပဒေ ထုပ်ပြန်ကာ ခွင့်ပြုထားကြသည်မှာ စိတ်ပျက်စရာပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျေးဇူးတော်က ထိုအရာများကို မပြုနှင့်ဟူ၍ အတိအလင်း သွန်သင်ထားပါသည်။ ခွင့်မပြုတာ ဖြစ်နိုင်တယ် ဟူ၍လည်း မပြောပါ။ အခုတော့ လုပ်ပါ။ နောက်ပိုင်း ကျရင် မလုပ်နဲ့ဟူ၍လည်းမပြောပါ။ အတိအကျ ပြောထားသည် မှာ နောက်တဖန် ဒုစရိုက် မပြုနှင့်။ ထိုမပြုနှင့် ဆိုသော စကားလုံးသည် ပြက်သားပါသည်။ ထပ်မံစဉ်းစား ကြည့်ပါ။ သင့်ကို စာတန်က မင်းနဲ့ငါ ခဏလောက် တွဲကလို့ ရမလား၊ ခဏလေးပါ၊ တကယ်ကို ခဏလေးပါ၊ (တစ်မိနစ် လောက်လေးပါ) ဟုပြောလာလျှင် သင်၏အဖြေက အားနာပြီး ဟုတ်ကဲ့ ဟုပြောလျှင် သင်သည် စာတန်၏ လွှမ်းမိုးမှု အောက်က မလွတ်သေးဘူး ဆိုတာ သိသာပါသည်။ သို့သော် သင်က ပြက်သားစွာ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ငါအဲဒီလို မလုပ်နိုင်ဘူး ဟူ၍ ပြက်သားစွာ ငြင်းဆိုခဲ့ပါက သင်သည် စာတန်၏ လွှမ်းမိုးမှု နှင့် လွတ်ကင်းပြီး ဘုရားသခင် ဘက်တွင် အပြည့်အ၀ ရပ်တည်နေကြောင်း သိသာ ထင်ရှားပေသည်။ အားနာခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို မပျက်ပြားစေပါနှင့်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး တို့သည် ကျေးဇူးတော်ကို ကြိုက်နှစ်သက် ကြပါသည်။ ထိုကျေးဇူးတော်၏ နောက်က အပိုင်းကို ကြောက်ကြပါသည်။ ကျေးဇူးတော်တွင် ဈေးပေါသော ကျေးဇူးတော်နှင့် တန်ဘိုးကြီးသော ကျေးဇူတော် နှစ်ခုအကြောင်းကို ပြောလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတော်ဟု ပြောလိုက်သည်နှင့် ရွှေ၊ ငွေ အစရှိသော မြင်နိုင်သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုသာ သင်မျက်စိထဲမှာ မြင်နေလျှင် ဈေးပေါသော ကျေးဇူးတော်ကိုသာ သင်မျှော်လင့် နေသည်ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ ဈေးပေါသော ကျေးဇူးတော်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ခွင့်လွတ်ခြင်း တရားလောက်သာ ဟောသည်။ နောင်တရဘို့ မတောင်းဆိုပါ။ အသင်းတော် စည်းကမ်းတွေ မပြောပါ။ ပွဲတော်မင်္ဂလာ အကြောင်း မပြောပါ။ နှစ်ခြင်း အကြောင်းလည်း မပြောပါ။ ၀န်ချ တောင်းပန်ခြင်းအကြောင်းလည်း မပြောပါ။ ဆုတောင်းဘို့လည်း မတိုက်တွန်းပါ။ နှုတ်ခပတ်တော်နဲ့ အသက်ရှင်ဘို့လည်း မတောင်းဆိုပါ။ ထိုဈေးပေါသော ကျေးဇူးတော်ကတော့ တပည့်တော် ဖြစ်စေခြင်းလည်း မရှိ။ ကားတိုင်လည်း မရှိ။ ယေရှုခရစ်တော်လည်း မရှိ။ ၀ိညာဉ်တော် တန်ခိုးကိုလည်း နားမလည်။ ခရစ်တော်၏ အသက်ရှင်မှုတွေလည်း မသိ….. အစရှိသည် တို့ဖြစ်သည်။
တန်ဘိုးရှိသော ကျေးဇူးတော်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ယေရှုခရစ်တော်၏ နောက်လိုက် ဖြစ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော ထိုသူ၏ အသက်တန်ဘိုးကို ပေးချေပြီးသား ဖြစ်သည်ကို နားလည် သွားသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကျေးဇူးတော်သည် သူ့ကို မှန်သော အသက်ကို ရရှိစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုတန်ဘိုးကြီးသော ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားရရန် အပြစ်ကို စီရင်ပြီး အပြစ်သားကို ဖြောင့်မက်သူ ဖြစ်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသောကြောင့် တန်ဘိုးကြီးပါသည်။ ထိုတန်ဘိုးရှိသော ကျေးဇူးတော်ကို လူသားများ ခံစားရန်အတွက် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ တစ်ဦးတည်းသော သားကို စွန့်လွှတ် ရသောကြောင့် တန်ဘိုး ကြီးပါသည်။ ယေရှု ခရစ်တော်က အသက်နှင့် ရင်းပြီး ပေးဆပ် ရသောကြောင့် တန်ဘိုးရှိပါသည်။ သို့သော် ကောင်းကင်သို့ ပြန်လည် ထမြောက်စေခဲ့ပါသည်။ ယေရှု ခရစ်တော်သည် ဘုရားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်ပါလျှက် လူဇာတိ ခံယူရသောကြောင့် တန်ဘိုးများစွာ ပေးဆပ်ရသည်။ ထိုကြောင့် တန်ဘိုး အလွန်ကြီးပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပြောကြားလိုသည်မှာ သင်ရယူခံစားသော ကျေးဇူးတော်သည် အပေါစား ကျေးဇူးတော်လား၊ တန်ဘိုးရှိသော ကျေးဇူးတော်လား။ သေချာစွာ ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး လေ့လာပါ။ အကယ်၍ တန်ဘိုးရှိသောကျေးဇူးတော်ကို သင်ရယူ ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသေးဘူး ဆိုလျှင် အလွန်ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းပါသည်။ သင်တို့ အသက်တာထဲမှာ တန်ဘိုးရှိသော ကျေးဇူးမင်္ဂလာများ ရယူပိုင်ဆိုင် ပါစေဟု ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။
← ကျေးဇူးတော်အကြောင်း (၂)
ပဋိညာဉ် (Covenant) →
One comment on “ကျေးဇူးတော် အကြောင်း (၃)”
SAPPHIRE KHAW . on 28/03/2013 at 4:02 AM said:
SAYA, THANKYOU SO MUCH FOR YOUR WONDERFUL MESSAGE.GBU. AMEN